သင့်မှာ Gmail Address နှစ်ခု ရှိတယ်ဆိုကြပါဆို့။ ဒါပေမဲ့ GTalk မှာ ချက်တင် ၀င်တဲ့အခါ Primary mail နဲ့ပဲ ၀င်နေရတယ်။ နောက် mail adress တစ်ခုနဲ့ပါ တပြိုင်နက် (polygamy) ထပ်ဝင်ပြီး အားရပါးရ ချက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်းလုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
၁။ Destkop ပေါ်က GTalk icon ကို right click လုပ်ပါ။၂။ Properties ကိုရွေးပါ။၃။ Target(location of file) ဆိုသောနေရာကို ရှာပါ။
၄။ ထို့နောက် Target Address ၏နောက်ဆုံးတွင် space ခြားပြီး /nomutex ဆိုသော စာသားလေးကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
၅။ ထို့နောက် Apply ကို Click လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် သင်၏ primary gamil address နှင့် GTalk သို့ Login လုပ်ပါ။ဒုတိယအကြိမ်ဝင်ရန်အတွက် Desktop ပေါ်တွင်ရှိသော GTalk icon ကို Click နှိပ်ပြီး secondary gmai address နှင့် username ကိုထည့်ပါ။ ဒါဆို သင့်တွင် GTalk window နှစ်ခု ပေါ်လာပြီး လက်မညောင်းမချင်း ချက်နိုင်ပါပြီ
Post From notes4pc.blogspot.com
Posted by Khaing Zaw at 3:23 AM 1 comments
Personality အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်မှာရှိသမျှ ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိသမျှကို အကောင်းဆုံးပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်လိုက်တာပါပဲ။
Personality ဆိုတာထဲမှာ ဖီးလိမ်းပုံ၊ ပြင်ဆင်ပုံ၊ ရုပ်ရည်ရူပကာယလည်း ပါသလို၊ ဆံပင်အနေအထား၊ အင်္ကျီအ၀တ်အစားလည်း ပါတယ်နော်။ ပြောပုံဆိုပုံ၊ ၀တ်ပုံစားပုံ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ဒါတွေလည်းပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘူး၊ စိတ်နေသဘောထားနဲ့အသိဥာဏ်၊ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုတာတွေလည်း ပါတယ်နော်။ Personalityဆိုတာ လူတစ်ယောက်မှာ ဖြစ်နိုင်သမျှ အကုန်လုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်တာလို့ အဓိပ္ပါယ် ကောက်ထားပြီးပြီ ဆိုတော့ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။
ဒါကြောင့် ပေါ့ပေါ့တန်တန် မနေဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေအောင် ကြိုးစားရမယ်။ ရုပ်ရည်လည်းသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်၊ အ၀တ်အစားလည်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်း၊ စိတ်ကလည်း သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လေး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေး ကြည်ကြည်လင်လင်လေးဖြစ်နေအောင် အမြဲတမ်းကြိုးစားရမယ်။
The development of personality means fidelity to the law of one's being.
ကိုယ့်ရဲ့ Personality တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ္စာရှိတာပါပဲ။
ဆရာတော် ဦးဇောတိကစာအုပ်ထဲက ကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်းများကို တင်ပြထားတာပါ။
Posted by Khaing Zaw at 6:37 PM2comments
ကွန်ပျူတာဖိုင်များတွင် Header code တွေပါတယ်။ အဲဒီ Header code တွေက Hex number တွေဖြစ်ပါတယ်။
Hex number ဆိုတာက0to F (0.1.2...9,A,B....F) တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Header code တွေကို ပြောင်းလိုက်ရင်
အဲဒီဖိုင်ကို ဖွင့်မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီယူဆချက်ကိုသုံးပြီးတော့ jpeg ဖိုင်တွေရဲ့ Header code ကိုပြောင်းရင်
အဲဒီ JPEG ဖိုင်ဟာ ဖွင့်မရတော့ဘူးလေ။ သူများမမြင်စေချင်တဲ့ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေကို ဒီနည်းလမ်းသုံးပြီး
ဘာ software မှမလိုပဲ ဖျောက်လို့ရပါတယ်။
1. Start ကနေ Run ကိုသွားပါ။ cmd လို့ရိုက်ထည့်ပါ။
2. အနက်ရောင် Command Prompt Window ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
3. debug "Your Picture File Location" လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ ဥပမာ. သင့်ပုံက D:\_ ထဲမှာရှိပြီး File name က
mypic.jpg ဆိုရင် debug D:\_mypic.jpg လို့ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Enter ခေါက်ပါ။
4.e100 လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
5. ။ ဥပမာ- 1381:0100 FF. လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ FF. ဆိုတာ မူရင်း Header code ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို သေချာမှတ်ထားပါ။ ပြီးတော့ AA လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
AA လို့မရိုက်ချင်လည်း 00,11,22,....,FF ထဲကနေ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုရိုက်ပါ။
ဒါပေမဲ့ မူရင်း Header code ကိုတော့ ရိုက်လို့မရဘူးနော်။
6. w လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
7. Writing xxxxx bytes ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ Writing 0B586 bytes
8. q လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
9. ပြီးရင် Exit လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် Command Prompt ကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် ပြီးသွားပါပြီ။ ကြိုက်တဲ့ Picture Viewer နဲ့ကြည့်ပါ။ လုံးဝမရပါဘူး။
1. အပေါ်ကအဆင့်ကအတိုင်း အဆင့် ၄အထိသွားပါ။
2. အဆင့် ၅မှာ မူရင်း header code ကိုပြန်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် ကျန်အဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ဒီpostက ကိုသူရိန်ဆီက တောင်းထားတာပါ....
Posted by Khaing Zaw at 1:43 PM 1 comments
What is That Files
ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုရဲ့ အမျိုးအစားကို မသိဘူးဆိုရင် ဒီဆိုဒ်မှာ သွားရောက် စစ်ဆေး ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က .pdf ဆိုတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို စစ်ဆေးကြည့်မယ် ဆိုရင် Adobe Acrobat ဖိုင်ဆိုတာကို ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ [Link]
Specifying Programs to run every time Windows Start
If you want to start programs every time windows runs, but would like to hide them from users by not having the listed in the Startup Folder or the WIN.INI file, you can have load them through the registry.
HKEY_LOCAL_MACHINE\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run or Runonce
3.Right click on the right panel
4.Pick NEW/String Value
5.Type it any name
6.For the value, enter the path and executable for the program you want to run
Removing the Shortcut Icon Arrows
2.Open the Key_HKEY_CLASSES_ROOT_
3.Open the Key LNKFILE
4.Delete the value IsShortcut
Viewing File Extensions in Windows
2. Go to HKEY_CLASSES_ROOT
3. Right click on .exe and click New\_String Value
4. Name it AlwaysShowExt
Adding an Application to the Right Click on Every Folder
Here is how to add any application to the menu when you right click on any folder. This could be useful if there is an app you always available and don't want to go through the Start menu
2. Go to HKEY_CLASSES_ROOT\_Folder\_Shell
3. Addakey Your App. (Allow any word)
4. Puttinga"&" in front ofacharacter will allow you to use the keyboard shortcut.(eg. &command)
5. Go to HKEY_CLASSES_ROOT\_Folder\_Shell\_Your App
6. Addakey Command
7. Give it the full path of your application as default value. (e.g. C:\_windows\_command.exe)
CreatingaNetwork Logon Banner
If you want to createaNetwork Logon Banner
2. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Winlogon
3. Createanew String Called LegalNoticeCaption
4. Enter the text for your banner
Removing Programs Listed from the Control Panel's Add/Remove Programs Section
2. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Uninstall
3. Delete any program here.
Automatic Screen Refresh
When you make changes to your hard drive and use Explorer, the changes are not usually displayed until you press the F5 key. To make the updates automatic;
2. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\_System\_Current ControlSet\_Control\_Update
3. In the UpdateMode Modify the value between 1 and 7
4. Restart Windows
Posted by Khaing Zaw at 4:21 PM 1 comments
blog တွင် မြန်မာပြက္ခဒိန် ထည့်သွင်းနည်း
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ကို ဘလော့ သမားများ အတွက် RSS version နဲ့ ထပ်ထုပ်ပေးလိုက်တယ်။ RSS Feed: http://samerss.myanmarcalendar.com
blogger.com ရဲ့ New version သုံးတဲ့လူတွေအတွက် နမူနာ
1) blogger.com တွင် Login ၀င်ပါ။
2) "Manage Your Blog" တွင် Layout ကိုနှိပ်ပါ။
3) Side bar ဘက်တွင် "Add Page Element" ကို နှိပ်ပါ။\_
4) Feed တွင် "Add To Blog" ကို နှိပ်ပါ ("Feed"-Add content from an RSS or Atom feed to your blog.)
5) "Feed URL" တွင် http://samerss.myanmarcalendar.com ကို ထည့်သွင်းပါ။ "Continue" ကိုနှိပ်ပါ။
6) Title ကို သင်နှစ်သက်သလိုပြင်လို့ရပါသည်။ ပြီးလျှင် "SAVE CHANGES" ကို နှိပ်ပါ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မြန်မာပြက္ခဒိန်မှ ရက်စွဲများ အလိုအလျှောက် ပြောင်းလဲနေပါလိမ့်မည်။
Posted by Khaing Zaw at 1:48 AM0comments
> လွမ်းတတ်မယ်ဆိုရင် ပြောပါတယ်
> နေ့စွဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့ နယ်ခြား
Posted by Khaing Zaw at 3:04 AM0comments
အခုနောက်ပေါ်တဲ့ MP3 Player တွေမှာ သီချင်းနားထောင်နေရင်း သီချင်းစာသားပေါ်အောင်လုပ်လို့ရနေပါပြီ။ နည်းကလွယ်လွယ်လေးပါ။ ပထမဆုံး သီချင်းဖိုင်ကို MP3 ထဲထည့်ပါ။ ဥပမာ- M2M-Pretty Boy ဆိုပါတော့။သီချင်းစာသားဖိုင်ကိုhttp://www.lrcdb.org/ ကနေ ရယူပါ။ ပြီးတော့ MP3 ထဲထည့်ပါ။သတိထားရမှာက စာသားဖိုင်နဲ့ အသံဖိုင်နဲ့ ဖိုင်အမည်ခြင်း တူရပါ့မယ်။ဒါဆိုရင် စနားထောင်လို့ ရပါပြီ။MP3 ကိုဖွင့်၊ နားကျပ်ကိုတပ်၊ သီချင်းဖွင့်၊ သီချင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ MP3က Mode ခလုတ်ကိုသုံးစက္ကန့်လောက်နှိပ်လိုက်ရင်သီချင်းစာသားလေးတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
Posted by Khaing Zaw at 1:15 AM0comments
ကျွန်တော်နှင့် သနပ်ခါး ပွင့်ကလေး
ကြယ်ကလေးတွေ စီးချင်း မထိုးကြပါနဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အိပ်စက်နေလို့ ပါကွယ်။
Posted by Khaing Zaw at 12:54 AM0comments
မြန်မာ Blogs ရေးချင်ရင်
Myanmar Blogs ရေးရအောင်
တော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့ Ebook ကလေးပါ.......
Posted by Khaing Zaw at 12:17 AM0comments
အဝေးကလရောင်ကလည်း ကမ္ဘာမြေအထိ အေးပါလိမ့်မယ်......
Posted by Khaing Zaw at 11:56 PM 1 comments
သူတို့က ချိုမြိန်တယ်လို့ ပြောပေမဲ့
Posted by Khaing Zaw at 11:53 PM0comments
ရထားဟာ ခါတိုင်းထက် ပိုမိုရှည်လျား
ဖွာရာရ ထစ်ချုန်း ပြတ်တောက်ကျနေခဲ့
နှုတ်မဆက် မိရင်လည်း အကောင်းသား
အ၀ါရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ ဂူသင်္ချိုင်း ဆန်လာ
မြေလို ပင်လယ်လို အက္ခရာ တစ်လုံးနဲ့
ငါတို့ ဆက် ချစ် နေကြဦးမယ်
တုန်ယင်စွာ လူးလွန့် ထွက်ခွာခဲ့ရပေါ့။
Posted by Khaing Zaw at 11:50 PM0comments
မျက်နှာအရေပြား တွန့်တွန့်ကြီးနဲ့ လူတွေက
မိုးတွေက တိတ်တာတောင် ကိုယ်ကရွာတုန်း။
သစ်ရွက်ကို ကိုယ်ပြန်စိုက်ဖို့ ကြိုးစားဆဲမှာ
ကျောက်တုံး တွေကိုလည်း ငုံ့ကြည့်ခင်မင်နေခဲ့။
တကယ်ဆို ကိုယ်ဟာ ဥယျာဉ်တစ်ခုပါပဲ
မြေပြင်မှာ ဘာမှ မပွင့်သေးတာက လွဲရင်ပေါ့။
Posted by Khaing Zaw at 11:42 PM0comments
Posted by Khaing Zaw at 11:34 PM0comments
ငါ့ အသည်းတစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သွားအောင်
Posted by Khaing Zaw at 11:04 PM0comments
Microsoft TestKing 2003
Latest Microsoft TestKing from MCP, MCSA to MCSE 2003 (+ Messaging & Security)
Microsoft 70 270
Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows XP Professional
Download : TestKing.Microsoft.070-270.Exam.Q.And.A.v37
Download : TestKing.Microsoft.070-284.Exam.Q.And.A.v35
Case Study with explanations
Download : TestKing.Microsoft.070-285.Exam.Q.And.A.v18
Download : TestKing.Microsoft.070-290.Exam.Q.And.A.v53
Implementing, Managing, and MaintainingaMicrosoft Windows Server 2003 Network
Download : TestKing.Microsoft.070-291.Exam.Q.And.A.v52
Download : TestKing.Microsoft.070-293.Exam.Q.And.A.v34
Planning, Implementing, and MaintainingaMicrosoft Windows Server 2003 Active Directory
Download : TestKing.Microsoft.070-294.Exam.Q.And.A.v33
DesigningaMicrosoft Windows Server 2003
Download : TestKing.Microsoft.070-297.Exam.Q.And.A.v19
Download : TestKing.Microsoft.070-298.Exam.Q.And.A.v16
Download : TestKing.Microsoft.070-299.Exam.Q.And.A.v14
Tags: testking download, microsoft testking, testking ebook
Posted by Khaing Zaw at 10:56 PM 1 comments
Labels: Microsoft TestKing 2003
I am university of computer student...
Microsoft TestKing 2003 (1)